Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya oo saldhigtay Nairobi kadib markuu siyaadasa qasay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya oo saldhigtay Nairobi kadib markuu siyaadasa qasay!!
Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya oo saldhigtay Nairobi kadib markuu siyaadasa qasay!!
Previous PostDaawo sawiro: Ciidamadii isku hor fadhiyey difaacyada Gaalkacyo oo goor dhow lakala qaaday arin farxad leh! Next PostMadaxweyne Balan qaaday in Wadankiisa uu qaabilayo Qaxootiga ay xadudaha ka xirteen Wadamada Yurub!!